लगानीकर्ताको माग बढ्दा दोस्रो बजारमा शेयर खोसाखोस - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › शेयरबजार › ब्रोकर कम्पनी ›
लगानीकर्ताको माग बढ्दा दोस्रो बजारमा शेयर खोसाखोस
| १६:३६:०४ मा प्रकाशित
४ मंसिर, काठमाडौं । मंसिर महिनाको पहिलो हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा हालसम्मकै उच्च रकमको शेयर खरीदबिक्री भएको छ । नेप्सेका १२ वटै उपसुचमा ग्रिन सिग्नल देखिँदा परिसुचक ३६.३२ अंकले वृद्धि भएको छ । नेप्से इतिहासमा अहिलेसम्मको उच्चतम अंक १८८१ हो ।
आज बजार ३६ अंकले बढेर १७७८ अंकमाथि पुगेको छ। शेयर बजार एकैदिन ६ अर्ब ११ करोड ६७ लाख ३० हजार ७१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार पनि भएको छ । कारोबार रकमको आधारमा यो हालसम्मकै उच्च हो ।
आज १९८ कम्पनीका १ करोड ४० लाख ६२ हजार ५०७ कित्ता शेयर ५६ हजार ३४१ पटक खरीदबिक्री भएका हुन् । व्यापार र होटलको सूचकमा ९ प्रतिशत धेरैको वृद्धि आएको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ४१ करोड बढीको शेयर खरीदबिक्री हुँदा १५ कम्पनीको शेयर ९ प्रतिशत धेरैले बढेको छ । कारोबारमा आएका ३२ कम्पनीको शेयरमूल्य मात्र घटेको छ ।
बजार विश्लेषका अनुसार बैंक ब्याज दरकै कारण शेयरबजारमाथि गएको हो । लगानीका अन्य क्षेत्रहरु कोरोनाका कारण सुस्त हुनु र घर जग्गा कारोबार पनि सुस्त हुनुले बजारमा लगानीको मात्र बढेको अनुमान गरिएको छ । बैंकहरुमा अत्याधिक तरलता रहेको र अझै चार–साढे चार खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा पनि पर्याप्त तरलता भएर ब्याज घट्ने विश्लेषणहरुको अनुमान छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी पछि हिमालयन डिस्टिलरीको २७ करोड ७ लाख, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २६ करोड १२ लाख, नेशनल लाइफको १८ करोड ४३ लाख, नेपाल टेलिकम १७ करोड ३१ लाख, नेको इन्स्योरेन्स १६ करोड ७७ लाख, शिवम् सिमेन्ट १६ करोड १८ लाख, एनआईसी एसिया १५ करोड ६० लाख, नागरिक लगानी कोष १३ करोड ७७ लाख र प्रभु बैंक १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। कुल कारोबार रकम ६ अर्ब ११ करोडमा यी १० कम्पनीको हिस्सा साढे ३३ प्रतिशत छ।
कारोबार अवधिभर रातो रहेको वाणिज्य बैंक समूह बजार बन्द हुने समयमा हरियो देखिएसँगै २.७१ अंक बढेर बन्द भएको छ। सञ्चालनमा रहेका २७ बैंकमध्ये २० वटाको वितरणयोग्य नाफा घटेको समाचार प्रकाशित भएकाले पनि बैंकिङ समूहका कम्पनीहरुमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम देखिएको छ ।
आज पाँचवटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ। तारागाउँ रिजेन्सी (ह्यात) होटल, युनिलिभर नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, हिमालयन डिस्टिलरी र विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सर्किट लागेको थियो ।
ह्यात होटलले पछिल्लो दुई त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । कोभिडका कारण होटल बन्दजस्तै छ। तैपनि कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर ३०८ रुपैयाँ पुगेको छ।
युनिलिभरले बुधबार मात्रै नाफा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसपालि लाभांश पनि निक्कै कम दिएको थियो। तैपनि कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८४९ रुपैयाँले बढेर २० हजार ३४४ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हिमालयन डिस्टिलरी पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको कम्पनी हो । कम्पनीले चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९२ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ। कम्पनीको बुधबार पनि मूल्य १० प्रतिशतले बढेको थियो । आज पनि १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता २९ सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ।
बोटलर्स नेपाल तराईको पनि मूल्य १० प्रतिशतले बढेर ९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ। कम्पनीको पनि नाफा घटेको छ । गत वर्षभरि कम्पनीले एक करोड नोक्सानी खाएको जनाएको थियो। अघिल्लो वर्षको असोजमा भने ३० करोड रहेको नाफा गत असोजमा घटेर २८ करोड ६० लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
विशाल बजारको शेयरमा पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस कम्पनीको पछिल्लो एक महिनामा मात्र १६ दिन कारोबार भएको छ।
जलविद्युतको ६३ करोड ७५ लाख, होटल समूहको १५ करोड ६६ लाख, व्यापार समूहको २१ करोड ५४ लाख, माइक्रोफाइनान्स समूहको ५३ करोड ९० लाख र बैंकिङ समूहको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ । जीवन बीमाको ८२ करोड ५१ लाख, निर्जीवन बीमाको एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। अन्य समूहको ८१ करोडको कारोबार भएको छ। बाँकी अरुको कारोबार भएको हो।
नेप्सेका अनुसार, निर्जीवन २० बीमा कम्पनीमध्ये १९ वटाको मूल्य बढेको छ। जीवन बीमामा कारोबार भएका सातवटैको मूल्य बढेको छ।बैंकिङ समूहका भने कारोबार भएका २६ मध्ये १३ को मूल्य बढेको छ, बाँकी १३ को घटेको छ। बिहीबार जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा सूचक पनि सर्वाधिक माथि पुगेको अर्को रेकर्ड कायम भएको छ। आज बजार पूँजीकरण पनि अहिलेसम्मकै उच्च रहेको नेप्सेले जनाएको छ।
त्यसैगरी प्रभु बैंकको ऋणपत्र २.२९, सनराइज म्युचअल फण्ड २.१८, एसबीएल ऋणपत्र १.९८, रैराङ हाइड्रोपावर १.९२, ग्लोबल आइएमई ऋणपत्रका लगानीकर्ताले १.९२ प्रतिशतले गुमाए । आज कारोबारमा आएका १३३ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने २३ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ। १६ वटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा भने कुनै परिवर्तन नभइकन नै बजार बन्द भएको छ ।
“अलटाइम हाई” विन्दुमा नेपाली दोश्रो बजार तर सानो करेस्कन आउने सम्भावना कति ? ३ दिन पहिले
लगानीकर्ताको लागि खुशीको दिन, नेप्से १८०० माथि बन्द हुँदा आजको ग्राफले के देखायो ? ५ दिन पहिले
शेयरबजार : हरेक दिन नयाँ रेकर्ड, दुई दिनकै १२ अर्बकाे कारोवार ६ दिन पहिले
शेयरबजार ऐतिहासिक रेकर्डतर्फ उन्मुख हुँदै, बजारमा अत्याधिक चहलपहल २ हप्ता पहिले
१७०० बिन्दु माथि पुगेको बजारलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा २ हप्ता पहिले
शेयरबजार पूँजीकरण झण्डै २३ खर्ब, नेप्से उच्चअङले वृद्धि हुँदै १७ सयमाथि पुग्यो ३ हप्ता पहिले
दुईनाले बन्दुकसहित पाँच जना पक्राउ १८ मिनेट पहिले
क्लब स्थापना दिवसका अवसरमा विद्यालयलाई सहयोग २४ मिनेट पहिले
विद्यालयमा दिइने सजायको स्वरूप बदलियो ३३ मिनेट पहिले
बुन्डेसलिगामा बार्यन जित्दा हल्याण्डको डर्टमुण्ड पराजित ६० मिनेट पहिले
तपाईकाे साप्ताहिक राशिफल ( मंसिर १४ गते आइतबारदेखि २० गते शनिबारसम्म) ४ घण्टा पहिले
स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सभामुखको आह्वान १८ घण्टा पहिले
महासंघको निर्वाचन : मतदान सम्पन्न, कसले जित्लान् ? १५ घण्टा पहिले
बालिकालाई खीर खान घरमा बोलाएर बलात्कार गर्ने ७६ वर्षीय वृद्ध पक्राउ १३ घण्टा पहिले
सूर्योदय २२ घण्टा पहिले
कार्तिक नाच प्रस्तुत गर्दै कलाकार ११ घण्टा पहिले
मध्यपूर्वमा संयमता अपनाउन राष्ट्रसंघको आग्रह १२ घण्टा पहिले
इरानी परमाणु वैज्ञानिकको हत्यामा इजरायलको सम्लग्नता रहेको इरानको दावी, बदलाको चेतावनी १२ घण्टा पहिले
राजनीति मूल्य, मान्यतामा आधारित नभए देश र जनताको हित हुन सक्दैन : अध्यक्ष यादव ६ दिन पहिले
जीवनस्तर उकास्न सामूहिक आलुखेती गर्दै दलित महिला [ फाेटाे फिचर ] ६ दिन पहिले
आजदेखि क्रिकेट खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सुरु ३ दिन पहिले
बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने पसल सञ्चालकको घरमा स्थानीयको आगजनी ५ दिन पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष भाषा आयोगको प्रतिवेदन पेश ६ दिन पहिले
परिवार नियोजनमा महिलाको सहभागिता पुरुषभन्दा बढी ३ दिन पहिले
कागेश्वरी पुस्तकालयमा देवकोटा, अर्याल र विकलको पूर्णकदको शालिक २ हप्ता पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २१ जना संक्रमितको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकको डेविट कार्ड हुनेलाई स्वास्थ परिक्षणमा १५ प्रतिशत छुट ३ हप्ता पहिले
शिविरमा पशुलाई उपचार गर्दै ६ दिन पहिले
वृद्धवृद्धालाई सिरक वितरण ५ दिन पहिले
फरार पाँच प्रतिवादी पक्राउ, कारवाहीका लागि अदालतमा पेश ४ हप्ता पहिले
न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्दा कृषि विश्वविद्यालयले पाएन भर्ना अनुमति ४ हप्ता पहिले
बस कतिबेला आउला २ हप्ता पहिले
खोला र नदीको चेपुवामा जमिन ३ महिना पहिले
पश्चिमका उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा सामान्य हिमपात ११ महिना पहिले
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ६० लाखभन्दा बढी ३ महिना पहिले
हतुवागढीमा सीमा सुरक्षा गर्न म्यादी प्रहरी भर्ना ८ महिना पहिले